स्वास्थ्य Archives - Page2of 50 - Samudrapari.com
काठमाडाैं - सामान्यतः अदूवालाई खानेकुराको स्वाद बढाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ । तर, यसको उपयोगिता यत्तिमा सिमित छैन । शरीरको तौल घटाउनका लागि अदुवा उपयोगी हुन्छ । वैदिक कालमा समेत तौल घटाउनलाई अदूवाको उपयोग गरिएको पाइन्छ । कसरी ? अदुवाको सेवनले हाम्रो शरीरको मेटाबोलिज्ममा सोझो असर गर्छ, जसले गर्दा तौल घट्छ । अदूवामा कुनै क्यालोरी हुँदैन र यसले शरीरको मेटाबोलिज्मलाई पनि बढाउँछ । शरीरको मेटाबोलिज्म ठीक भए हाम्रो पाचन पनि ठीक हुन्छ र शरीर स्वस्थ रहन्छ । यसले शरीरको क्यालोरीलाई घटाउँछ र हाम्रो त...
काठमाडौं - पछिल्लो तीन वर्षमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट करिब २०० नर्स विदेश पलायन भएका छन् । अन्य अस्पतालमा भन्दा राम्रो सेवा सुविधा दिने अस्पतालका रुपमा चिनिएको शिक्षण अस्पतालमा पनि सन्तुष्ट हुन नसकेपछि नर्सहरु राजीनामा दिँदै विदेश पलायन हुने क्रम बढेको हो । पछिल्लो पाँच वर्षमा विदेशिने नर्सको संख्या उच्च रहेपछि २०७१ पुसदेखि नर्सिङ विभागले व्यवस्थितरूपले रेकर्ड राख्न थालेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका अनुसार २०७१ पुसदेखि चैतसम्म २२ जना, २०७२ मा ५७ जना, २०७३ मा ६९ जना, २०७४ पु...
जसले बनाउँछ हृदयाघात
काठमाडौं - संसारमा हृदयाघातको समस्याबाट मृत्यु हुनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । विकसित र विकासशील मुलुकका मानिसको बढ्दो व्यस्ततासँगै अव्यवस्थित जीवनशैलीका कारण हृदयाघातको समस्या पनि उसै गरी बढ्दै छ । मुटुसम्बन्धी समस्या बढ्नुको प्रमुख कारण खानपान र जीवनशैली हो । तपाईंले खाने खाना नै मुटुरोगको कारक हुन सक्छ । यी खाना हुन्, जसले मुटुको समस्या निम्त्याउँछ : आलु चिप्स आलु या मकैको चिप्समा बढी मात्रामा ट्रान्स फ्याट, सोडियम, काब्र्सजस्ता तत्व हुन्छ, जुन स्वास्थ्य र मुटुका लागि राम्रो मानिदैन ।...
एसियाली चिकित्सा विद्यार्थीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा
काठमाडौं - दक्षिण एसियामै पहिलोपटक एशियाली चिकित्सा विद्यार्थी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही माघ ७ देखि १२ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने भएको छ । एसियन मेडिकल स्टुण्डेटस एशोसिएन नेपालको आयोजनामा हुन लागेको सो सम्मेलनमा नेपाललगायत भारत, बंगलादेश, थाइल्याण्ड, जापान, सिंगापुरलगायत १६ राष्ट्रका चिकित्सा विषयका विद्यार्थीको सहभागिता रहने यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । सो अवसरमा एशोसिएनका अध्यक्ष डा सन्तोष उपाध्यायले यो चिकित्सा विद्यार्थीले गर्ने सबैभन्दा ठूलो सम्मेलन भएको ...
उपियाँ र जुम्राका कारण पाँच वर्षमा २ करोड ५० लाखको मृत्यु
काठमाडाैं - चौधौँ शताब्दीमा युरोएसिया तथा मध्य युरोपमा फैलिएको भयानक महामारीका कारण दुई करोड ५० लाख भन्दा धेरै मानिसको ज्यान गयो । प्लेगसहितका महामारीका कारण सन् १३४७ देखि १३५१ को बिचमा ठूलो संख्यामा मानिसको ज्यान जाने गरी फैलिएको महामारीको कारण मुसा रहेको मानिदै आएको थियो । तर पछिल्लो अनुसन्धानले महामारीको कारक मुसा नभएर मानिस आफै रहेको देखाएको छ । मानव इतिहासमा सबैभन्दा भयानक महामारीको रुपमा रहेको ब्ल्याक डेथका लागि मुसा मात्रै दोषी नरहेको अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् । शृङ्खलाबद्ध रुपमा...
मधुमेहले मस्तिष्कघात गराउँछ
काठमाडौं - मधुमेहका प्रकार इन्सुलिन बनाउने कोषमा खराबी भए वा नष्ट भएको अवस्थामा शरीरमा इन्सुलिनको कमी हुन जान्छ र ग्लुकोजको मात्रा बढ्छ । यस्तो प्रकृतिको रोग विशेषगरी ३० वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसमा देखिन्छ । मधुमेह लाग्ने अर्को तरिका भनेको इन्सुलिनको कमीले शरीरमा भएको ग्लुकोज नष्ट गर्ने प्रक्रियामा कमी आउँछ र मानिसमा मधुमेह लाग्छ । विशेषगरी ४० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका मानिसलाई यस्तो रोग लाग्ने गर्छ । यसकारण लाग्छ मधुमेह कतिपयलाई वंशाणुगत गुणका कारण मधुमेह लाग्न सक्छ । शारीरि...
काठमाडाैं - कतिपय भिटामिन र खनिजले बेग्लाबेग्लै काम नगरी एकसाथ काम गर्छन् । कतिपय अवस्थामा भने एउटाको प्रभावलाई अर्कोले प्रभावहीन बनाउँछ । त्यसैले हामीले भिटामिन-खनिजका चक्की-क्याप्सुल खानुभन्दा भिटामिन-खनिजयुक्त भोजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । किनभने भोजनमा एउटा मात्र नभएर विभिन्न पोषक तत्व वा भिटामिन-खनिज पाइन्छ, जसले आपसमा प्रतिक्रिया गर्छन् वा एकसाथ काम गर्छन्। एकसाथ काम गर्ने पोषक तत्व निम्नानुसार छन्ः भिटामिन डी र क्याल्सियम अरु पोषक तत्वजस्तै क्याल्सियम पनि सानो आन्द्राले सोस्छ । हाड बल...
एम्बुलेन्स सेवाका लागि देशभर एउटै टेलिफोन नम्बर दिने तयारी
काठमाडौं - सरकारले एम्बुलेन्स सेवाका लागि देशभर एउटै टेलिफोन नंको प्रयोगका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । देशभरबाट ११२ नंमा फोन गर्दा एम्बुलेन्स सेवामा फोन जाने गरी प्रक्रिया अघि बढेको हो । एम्बुलेन्स निर्देशका २०७३ को बुँदा नं १२ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बुलेन्स सञ्जालका लागि देशभर एकै टेलिफोन नं रहने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सो बुँदा ढिलै भए पनि कार्यान्वयन तयारीमा मन्त्रालय लागेको हो । निर्देशिकामा एम्बुलेन्स सञ्जाल तथा ट्रयाकिङअन्तर्गत एउटै क्षेत्रमा सेवा पुयाउने गरी एकभन...
काठमाडाैं - आँखाको ज्योती राम्रो बनाउन घरेलु खानेकुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । पावरवाला चस्मा लगाउनेले समेत यी खानेकुरा खाने हो भने दृष्टिमा सुधार आउने अध्ययनले देखाएको छ । त्यसकारण घरमै पाइने यी सामग्रीबाट प्राकृतिक रूपमै आँखाको ज्योति राम्रो बनाउनुहोस : हरियो तरकारी हरियो सागसब्जीमा पाइने भिटामिन लगायतका पोषकतत्वले आँखाको ज्योती राम्रो बनाउन सहयोग गर्छ । जिरा जिरा र मिस्री बराबर मात्रामा लिएर राम्रोसँग पिस्ने र एक चम्चा घिउसँग दिनहु खाने । सुकुमेल तीनचारवटा सुकुमेल र एक चम्चा सुपलाई ...
काठमाडौं – मानिसको तालुको छाला मर्ने र नयाँ पैदा हुने क्रम निरन्तर चलिरहन्छ । यसरी तालुमा छाला मर्ने र नयाँ पैदा हुने क्रम जारी रहँदा टाउकोमा सेता, मसिना, फुस्रा दागहरू देखिन थाल्छन् । यसैलाई हामी चाया भन्छौँ । गर्मी मौसमको तुलनामा जाडोमा चायाको समस्या बढी हुन्छ । टाउकोमा अत्यधिक चाया पर्दा अरूका अगाडि लाजमर्दो स्थिति पैदा हुने, आत्मविश्वास गुम्ने र आत्मबल पनि कमजोर हुने अवस्था आउने हुन्छ । त्यसैले, चायालाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्नु राम्रो हुन्छ : डा. सबिना भट्टराई केएमसी, सिनामंगल च...
यस्तो छ प्रदेशसभा सांसदको सपथ व्यहोरा